Ampidino fireworks castle APK ho an'ny Android
Ampidino fireworks castle
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (84.00 MB)
Ampidino fireworks castle,
Ny lalao lapa afomanga dia lalao simulation izay azonao lalaovina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasa Android.
Nijery ny fampisehoana afomanga foana izahay. Mendrika ny hijerena ilay fety aminny sary mahafinaritra namboarina taminny alàlanny cartridge miloko maro. Raha mbola tsy nanandrana nanipy tena ianao taloha na raha hitanao fa mampidi-doza io dia manana sosokevitra iray ho anao aho.
Lalao goavambe ity izay tsy hampijaliana anao na aminny fomba inona na manao ahoana ary afaka mamorona endrika afomanga sy loko misy anao ianao. Afaka milalao lalao mahafinaritra toy izany ianao na aiza na aiza ary na aiza na aiza no tadiavinao. Azonao atao ny mahazo eo an-tamponny lapa ary mitifitra eto. Makà sary vitsivitsy hanehoana ireo sary tsara tarehy ireo ary avy eo angony ireo kintana. Aminizany fomba izany, ho olona mamita ny haavonny volamena betsaka indrindra.
Ho mahaliana anao ny rivo-piainana aminity lalao ity, izay misy sary mahafinaritra an-jatony. Hahafaly anao indrindra aminny lalao fampiharana sy fotoana mahafinaritra. Ankoatrizay, tsy misy na inona na inona aminny lalao manery anao. Tsy mbola nahita lalao tsaratsara kokoa ianao aminizay ahafahanao mandany ny fotoana malalaka anananao. Aminio lafiny io dia tsy mitovy aminny lalao hafa izy io ary manome anao traikefa samihafa. Raha te ho mpiara-miasa aminity lalao adventurous ity ianao dia azonao atao ny misintona ny lalao maimaimpoana aminny findainao.
fireworks castle Specs
Haben'ny rakitra: 84.00 MB